कस्तो लाग्यो मोडल अञ्जली अधिकारीको यो अवतार ? (तस्वीर सहित) - www.dthreeonline.com
कस्तो लाग्यो मोडल अञ्जली अधिकारीको यो अवतार ? (तस्वीर सहित)
प्रकाशित मिति: शुक्रबार, बैशाख ०३, २०७८ समय: १७:२४:४५
ईटहरी/ नेपाली लोकदोहोरी मोडलिङमा चलेको र ब्यस्त नाम हो अञ्जली अधिकारी । यदाकदा ट्रोलको सिकार समेत बन्ने अधिकारीको डिमान्ड लोकदोहोरिमा निकै छ । हरेकदिन जसो उनी म्युजीक भिडियो छायांकनमा ब्यस्त हुन्छिन् । ब्यस्तताकै बाबजुद पनि उनी सामाजिक संजालमा एक्टिभ भने भैरहन्छिन । प्रायः भिडियो छायांकनका तस्वीरहरुलाई उनले आफ्नो फेसबुक वालम साझेदार गरिरहेकी हुन्छिन् ।
यस्तैमा एक म्युजिक भिडियो छायांकनका क्रममा उनको कैद भएका तस्विर भने अलि फरक शैलीको छ । हेल्मेट लगाएर सारी चोलोमा बोल्ड अवतार दिने प्रयास उनले गरेकी छन् । कालो चस्माले उनलाई बोल्ड देखिन अझै साथ दिएको छ । आकर्षक शारीरिक बनावट र सुन्दरताले भरिएकी अञ्जलीले फिल्ममा पनि अभिनेत्रीको रुपमा प्रयास गरेकी थिइन् । अहिले सर्वत्र चर्चामा रहेको फिल्म ‘प्रेमगीत-३’ मा अभिनेत्रीको खोजी हुदा उनले पनि अडिसन दिएकी थिइन् । अडिसनमा उनको चर्चा भएपनि सो कार्यमा सफल भने भईनन् ।
काठमाडौँ/ बिगतका बर्ष झै यस बर्ष पनि ‘आइसी डिजाइनर रनवे १०’ फेसन शो आयोजना हुने भएको छ । आइसी कलेजको आयोजनामा आगामी २४ ड...
इटहरी/ कोरोना महामारी साम्य हुदै गएपछि प्राय: सबै क्षेत्रहरु यतिबेला खुल्ला भैसकेको छ । हाल सौन्दर्य प्रतियोगिताको क्षेत...
इटहरी/ विश्व कोरोनामय बनेको लामो समयपछि अहिले जनजीवन सामान्य बन्दै गएको छ । यद्यपि कोरोना अन्त्य भने भएको छैन । गएको वर्...
प्रियंका र आयुष्मानको नव सन्तान आयंकासंग लक्ष्मीपुजा
इटहरी/ हिन्दु नेपालिहरुको दोश्रो ठूलो पर्वको रुपमा रहेको तिहार सुरु भैसकेको छ । गएको वर्ष कोरोनाले तिहारलाई नेपालिहरुले ...
यस्तो रह्यो नेपाली सेलेब्रेटीको लक्ष्मीपुजा (तस्वीर सहित)
इटहरी/ कोरोनाका कारण कलाकारहरू पछिल्लो समय जमघट हुन सकिरहेका थिएनन् । अब भने सिनेमा क्षेत्र समेत चलायमान हुन थालेसंगै कल...
चलचित्र ‘कठपुतली’ पुष १५ गतेबाट सिनेमा हलहरुमा रिलिज हुने
‘लिटिल एण्ड टिन प्रिन्स एण्ड प्रिन्सेस इन्टरनेशनल’ सम्पन्न, एउटै स्टेजमा ४ विजेता घोषित
प्रदेश १ मुख्यमन्त्रीको रचना रिमालसंग ‘वान साईडेड लभ’, अझैपनी पछ्याउने (भिडियो)
दमकमा इन्ट्राको कार्यक्रम भोलि, कलाकारहरुको जम्बो टोलि
सुरुभयो चलचित्र ‘गोर्खा वारियर-२’को बाँकी छायाँकन
पौष अन्तिममा ‘नेपाल मिडिया अवार्ड २०७८’ हुने